Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် အာဆီယံနှစ်(၅၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပ
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် အာဆီယံနှစ်(၅၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပ
(၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်၊ လန်ဒန်မြို့။)
ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးမှူး၍ “အာဆီယံနှစ်(၅၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားအစီအစဉ်များ”ကို ၁၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရေးရာဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စွာမင်းနှင့် ဇနီး ဒေါ်အေးမင်းမြတ်၊ မြန်မာသံရုံး၊ စစ်သံရုံးတို့မှ ဝန်ထမ်းများသည် လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက် အာဆီယံသံရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားအစီအစဉ် ပထမပိုင်းအဖြစ် မွန်းလွဲ(၁၄:၃၀)နာရီတွင် ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ The Locarno Suite ၌ [email protected] Business Forum အား “The UK & ASEAN: New Opportunities, New Futures.” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဗြိတိန် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Rt. Hon Dr. Liam Fox MP နှင့် UK-ASEAN Business Council မှ Chairman ဖြစ်သူ Mr. Kevan Watts တို့မှ အဖွင့်အမှာစကားများ အသီးသီးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယပိုင်းအဖြစ် ညနေ (၁၈:၀၀)နာရီတွင် လန်ဒန်မြို့ရှိ Lancaster House ၌ အာဆီယံ နှစ်(၅၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ ကျင်းပရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယ ဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ ဒုတိယဝန်ကြီး The Rt Mark Field MP နှင့် ဧည့်သည်တော် အင်ဒိုနီးရှား ဒုတိယသမ္မတ H.E. Muhammad Jusuf Kalla တို့မှ အဖွင့်အမှာ စကားများ ပြောကြားခဲ့ကြ ပါသည်။